Ndandingubani Ngaphambili Ngomhla Wokuzalwa?
kuqala » I-Numerology » Ndandingubani kubomi obudlulileyo ngomhla wokuzalwa
Omnye wabafundi bethu ugqibele ngokusibuza “Ndandingubani kubomi obudlulileyo ngomhla wokuzalwa?", lo ngumbuzo onomdla kakhulu kwaye unempendulo!
Umhla nenyanga yethu yokuzalwa inokutyhila iinkcukacha ezininzi ngobomi bethu, obukhoyo nobudala.
Kule meko, kukho novavanyo lobomi obudlulileyo, kodwa alusekelwanga kuzo naziphi na iinkcukacha ezithile zobomi bethu. Ngoko ke kufuneka sibhenele kwi-numerology.
Ngokusebenzisa amanani siya kujoyina usuku nenyanga yokuzalwa, ngaloo ndlela sibona ukufana kwethu nomntu esasinguye ngaphambili.
Ubomi Obudlulileyo: Bendingubani ngedate yokuzalwa?
Ukujonga ukuba bekunjani kubomi obudlulileyo kufuneka ujonge usuku nenyanga owazalwa ngayo. Amaqela athile abantu azazisa ngokulinganayo ngokokuzalwa.
Masiyishiye yonke le mihla ingezantsi, jonga nje ukuba yeyiphi eyakho kwaye ujonge kube kanye nokuba ubungubani!
Ukususela nge-14 kaJulayi ukuya kwi-28th / Septemba 23rd ukuya kwi-27th / Oktobha 3 ukuya kwi-17: Impembelelo entle
Ukuba wazalwa ngenye yemihla edweliswe ngasentla, yazi ukuba ube nempembelelo entle kakhulu kwabanye abantu. Wanikela imizekelo emihle waza wabonisa ukuba kufanele kube njani ukuphila ngendlela efanelekileyo.
Ukongezelela, wayengumntu okrelekrele nokwaziyo ukweyisela. Wayesenza ngemithetho kwaye wayethanda ukuphila ubomi obuthe ngqo nobungeyonyani.
Ndandikuthiyile ukubona abantu beqhathwa, bekhohlisa nayo nantoni na engcolisa ulungelelwaniso lwendalo lwehlabathi. Le mihla mi-3 ikhethekileyo, ube nethamsanqa ukuba wazalelwa kwenye yazo!
Ukususela ngoJanuwari 22nd ukuya kwi-31st / Septemba 8th ukuya kwi-22nd: Umzobi
Wazalelwa phakathi kwe-22 kaJanuwari kunye ne-31st okanye phakathi kwe-8 kaSeptemba kunye ne-22nd? Ke, ubuligcisa elikhulu nelidume kakhulu kwihlabathi!
Wayenetalente yendalo kwizinto ezininzi, kodwa isiteji yayilihlabathi lakhe. Wayekuthanda ukuba seqongeni kunye namakhulu okanye amawaka abantu ababethanda izenzo zakhe.
Wayedume, kodwa wayehlala eyazi indlela yokugcina ukunyaniseka kwakhe ngaphandle kodumo "ukuya entloko". Ngokungathandabuzekiyo yayiyintsika yengqalelo ngelo xesha!
Ukususela ngoJulayi 29 ukuya ku-Agasti 11 / Oktobha 30 ukuya kuNovemba 7: Umbhali
Ubhale ukukhuthaza abantu ukuba baqhubele phambili kwaye bafezekise zonke iinjongo zabo.
Wayengumntu othanda ukubhala nokufundisa abantu. Ndandithanda ukubonisa indlela yokungoyiki kunye nendlela yokufezekisa zonke iinjongo, kungakhathaliseki ubunzima obubonakalayo.
Asinakumxelela ukuba wayengumbhali ophumeleleyo okanye hayi, siyazi nje ukuba uwenze ngokugqibeleleyo umsebenzi wakhe.
Ukususela nge-8 kaJanuwari ukuya kwi-21st / ngoFebruwari 1st ukuya kwi-11: Isihange!
Ngokuqinisekileyo ubungayilindelanga le mpendulo xa ubona umhla wakho wokuzalwa ngasentla, kodwa sonke sinexesha lethu elidlulileyo.
Ubusisihange esikhulu, esiba izinto ezininzi kwizityebi, kodwa uthanda ukunceda abo basweleyo kakhulu.
Awuzange ube ngomnye wabo babekugcinela yonke into, endaweni yoko wawunikela abanye abantu ababebudinga ngaphezu kwakho.
Ukuba nawe uyafuna ukwazi ukuba ndafa njani kubomi bam bangaphambili, kunokwenzeka kakhulu ngexesha lokuphanga.
Ukususela ngo-Matshi ukuya kwi-1th / ngoNovemba 10 ukuya kwi-27 kaDisemba: umzobi
Ngaphambili, kwakuyinto eqhelekileyo ukuba abantu bafumane imisebenzi eyahluke kancinane kuneyanamhlanje. Kule meko, wawungumzobi wesitrato owachitha iintsuku zakhe epeyinta eyona nto wayeyithanda kakhulu, indalo!
Yayibubomi obuhlwempuzekileyo, obungenamvuzo kwaye, ixesha elininzi, ungaqatshelwanga umsebenzi wakho, kodwa yayiyinto owawuthanda ukuyenza.
Wayonwabile, kangangoko wayenako kwaye wenza imisebenzi yobugcisa emangalisayo!
Ukususela ngoFebruwari 12 ukuya kwi-29 / Agasti 20 ukuya kwi-31st: Igorha
Ngelishwa, kwimihla yakudala kwakuyinto eqhelekileyo ukuba kubekho iimfazwe ubusuku nemini. Kule meko, kwakukho ukhetho olukhulu lwamadoda aye ngqo kwiindawo zokulwa. Yayilityala lakho!
Ubuligorha elilwa awona madabi anzima kweli hlabathi. Wakwazi ukusinda ixesha elininzi lobomi bakhe, kodwa ekugqibeleni wafela edabini.
Ngo-Epreli 20 ukuya kwi-8 kaMeyi / Agasti 12th ukuya kwi-19th: I-scout
Ukuba ubungazi, i-scouts ngaba bantu bakhwela ihashe labo kwaye abaya kuhlola iindawo zotshaba ukuze bahlaselwe kwixesha elizayo okanye bajonge nje into abayenzayo.
Umfundi owasibuza ukuba ndingubani ebomini obudlulileyo ngomhla wokuzalwa wazalwa ngo-Agasti 13, ngoko uyazi ngoku ukuba wayengumhloli.
Wayenomsebenzi oyingozi, kodwa wawumchulumancisa yonke imihla yobomi bakhe!
Ukususela kwi-9 ukuya kwi-27th kaMeyi / 29th kaJuni ukuya kwi-13 kaJulayi: Gqwirha
Mandulo kwakuyinto eqhelekileyo ukuba nabani na athathwe njengegqwirha. Yenza nje iyeza lenziwe ekhaya kwaye kungekudala watyholwa ngobugqwirha.
Kule meko, kubomi bangaphambili wawuligqwirha elinikwe umsebenzi wokufumana amayeza endalo anamandla!
Akazange enze ubugqwirha bubi okanye nantoni na enjalo, wayengumntu ochitha ixesha lakhe enceda abanye ukuba baphilise izigulo zabo kunye nezigulo abanazo emizimbeni yabo.
Ukususela ngo-Matshi 11 ukuya kwi-31st / Oktobha 18 ukuya kwi-29th / ngoDisemba 19 ukuya kwi-31st: isifundiswa
Ngaba uyabazi abo bantu banikela ixesha labo kwisayensi kwaye bafunda ezo zinto kungekho mntu uzikhumbulayo? Kaloku, wawungomnye wabo bantu!
Ndandithanda ukwenza imifuniselo enxulumene nezityalo, izinto eziphilayo kunye nendalo.
Ngelishwa, asinakukuxelela ukuba baphumelele okanye abaphumelelanga, kodwa usenokukhumbula ezinye zezi nkcukacha!
Ukususela ngoMeyi 28 ukuya kuJuni 18 / Septemba 28 ukuya kwi-2 Oktobha: umncedi wokwenyani
Ngaphambili, kwakuxhaphake kakhulu ukuba nezifo eziyingozi ezazitshabalalisa izixeko ziphela. Ubungomnye wabantu abakwazileyo ukuphuncuka kwezi zigulo nozinikele ekuncedeni abanye abantu.
Wabeka ubomi bakhe esichengeni ukuze aphilise abanye aze abanike uhlobo lonyango ababelufuna.
Wayengumntu okhaliphileyo, onamandla amakhulu nokuzinikela okukhulu entliziyweni yakhe!
Ngo-Aprili 1 ukuya kwi-19, ngoNovemba 8 ukuya kwi-17: Umlweli woxolo
Ngemihla yakudala, wawungomnye waba bantu bazimanya neqela elincinane labantu ukuze benze iyelenqe nxamnye norhulumente. Yayingeyonto imbi, yayingamayelenqe nje okunceda abantu babe nobomi obungcono.
Ukuba nenkululeko engakumbi yokuthetha, amalungelo amaninzi kunye neemeko ezininzi ebomini babo.
Wayengumntu onobuntu obuqinileyo, onenkalipho enkulu nokulungeleyo ukunceda abo babekufuna ngamandla oko!
NgoJanuwari 1 ukuya kwi-7th / Juni 19th ukuya kwi-28th / Septemba 1st ukuya kwi-7th / Novemba 18th ukuya kwi-26th: Mfundisi
Uchithe phantse lonke ixesha lakho ekufundiseni abanye abantu. Wayengumfundisi wesikolo samabanga aphantsi (njengoko simbiza njalo namhlanje) ezinikele kakhulu ebantwaneni.
Yabanceda bafunda ukufunda, ukubhala nokufunda iziseko zobomi. Ngezo mini, kwakuncinane kakhulu okwakunokufundwa ukuba wawungengobutyebi, kodwa wawusenza konke okusemandleni akho ukunceda abantwana ngeyona ndlela ifanelekileyo.
Ukuba ndandingubani ngaphambili ubomi buchaphazela le nto ndiyiyo namhlanje?
Lo ngumbuzo onenkohliso kancinane ukuwuphendula, kodwa kukho abo bakholelwa njalo. Apha asisathethi nge-numerology, kodwa malunga nokuvela ngokutsha.
É kuqhelekile ukuba eminye imikhondo iyadlula, incasa kunye nobuntu obuthile ukusuka komnye umntu ukuya komnye. Khawufane ucinge, ukuba uyathanda ukupeyinta, kunokwenzeka ukuba, kubomi bakho obudlulileyo ubungumntu onothando olukhulu lokupeyinta!
Ngoko impendulo yalo mbuzo nguewe. Ubungubani kubomi bakho bangaphambili inokuchaphazela izinto ozithandayo, indlela oyiyo kunye nobuntu bakho bonke kule mihla.
Ngaba isiphumo sokuba ndandingubani kubomi obudlulileyo ngomhla wokuzalwa i-100% ilungile?
Asikwazi ukuqinisekisa ukuba isiphumo sichanekile nge-100%, oko kwakungenakwenzeka.
Uninzi lwezi mpendulo zingentla zinikwe ngokweemvavanyo zobuntu kunye nezifundo, kodwa akukho namnye kubo ongqongqo ngokwenzululwazi.
Ke, sicebisa ukuba ujonge ingcebiso yethu yokuba ubungubani kwaye ujonge ukuba usenazo na iimpawu zobuntu baloo mntu mnye.
Fumanisa Okuninzi Ingelosi yakho enguMgcini womhla owazalwa ngawo
Fumanisa umphefumlo wakho ngomhla wokuzalwa
fumanisa intsingiselo yokubona ixesha elichanekileyo kwiwotshi
I-Numerology iyakwazi ukusinika iimpendulo ezipheleleyo nezikhanyisayo ngobomi bethu, njengokuba wawungubani kubomi bakho bangaphambili ngomhla wakho wokuzalwa.
Sifuna ukukukhumbuza kwakhona ukuba Eli nqaku lifundisa nje kwaye alinabungqongqo besayensi..
1 Ubomi Obudlulileyo: Bendingubani ngedate yokuzalwa?
1.1 NgoJulayi 14-28 / Septemba 23-27 / Okthobha 3-17: Impembelelo entle
1.2 NgoJanuwari 22nd ukuya kwi-31st / Septemba 8th ukuya kwi-22nd: Omnye uMculi
1.3 NgoJulayi 29 ukuya ku-Agasti 11 / Oktobha 30 ukuya kuNovemba 7: Umbhali
1.4 NgoJanuwari 8 ukuya kwi-21st / ngoFebruwari 1st ukuya kwi-11th: Isihange!
1.5 NgoMatshi 1st ukuya kwi-10th / Novemba 27th ukuya kuDisemba 18th: Umzobi
1.6 NgoFebruwari 12-29 / Agasti 20-31: Iqhawe
1.7 Ngo-Epreli 20 ukuya kwi-8 kaMeyi / Agasti 12th ukuya kwi-19th: I-scout
1.8 Ngomhla wesi-9 ukuya kowama-27 kuJuni ukuya kowe-29 kuJulayi: Igqwirha
1.9 NgoMatshi 11-31 / Okthobha 18-29 / Disemba 19-31: Umfundi
1.10 NgoMeyi 28 ukuya kuJuni 18 / Septemba 28 ukuya ku-Okthobha 2: uMncedi wenene
1.11 Ngo-Epreli 1st ukuya kwi-19th, ngoNovemba 8th ukuya kwi-17th: uMlweli woXolo
1.12 Ukususela nge-1 kuJanuwari ukuya kwi-7th / Juni 19th ukuya kwi-28th / Septemba 1st ukuya kwi-7th / Novemba 18 ukuya kwi-26th: Utitshala omnye
2 Ukuba ndandingubani ngaphambili ubomi buchaphazela le nto ndiyiyo namhlanje?
3 Ngaba isiphumo sokuba ndandingubani kubomi obudlulileyo ngomhla wokuzalwa i-100% ilungile?